Global Voices teny Malagasy » Nahoana ny Twitter no manakana ny kaontim-panjakana ao Venezoelà? · Global Voices teny Malagasy » Print
Nahoana ny Twitter no manakana ny kaontim-panjakana ao Venezoelà?
Voadika ny 05 Mey 2019 6:33 GMT 1	 · Mpanoratra Ellery Roberts Biddle Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Amerika Latina, Venezoela, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Mediam-bahoaka, Politika, Teknolojia
Antsipiriam-pandravahana avy amin'ny artista Venezoelana Eduardo Sanabria. Nalaina avy ao amin'ny horirantava Facebook ary nahazoana alalana.
Raha niakatra ho any amin'ny haavo vaovao tamin'ity herinandro ity ny fifanandrinana teo amin'ny tafi-panjakana Venezoelana su ,u mpitarika ny fanoherana, naaton'ny Twitter ireo kaonty maro an'ny minisiteram-panjakana venezoelana sy ireo kaonsilà vahiny tamin'ny 1 sy 3 mey.
Samy naato avokoa ny kaonty Twitter ho an'ny minisiteran'ny fanabeazana, solika ary ny raharaham-behivavy tamin'ny voalohany mey:
Totohondry tsy ifanarahana: naato an-tondromolotra fotsiny izao ny kaontin'andrimpanjakana venezoelana.
Naato amin'izao fotoana izao -
Minisiteran'ny Herim-bahoaka ho an'ny vehivavy @MinMujer 
Minisiteran'ny Herim-bahoaka ho an'ny fanabeazana @MPPEDUCACION 
Minisiteran'ny Herim-bahoaka ho an'ny Solika @MinPetroleoVE 
Tamin'ny fotoana namoahana ny lahatsoratra, mbola naato ireo kaonty ireo. Naverina ho afa-miasa  kosa ny kaonty sasany tany amin'ny kaonsilà, anisan'izany ny kaonsilà ao Vancouver, Canada.
Tsy vao sambany  ireo manampahefanam-panjakana na manampahefana ao an-toerana ao amin'ny firenena no tratran'ny kaonty niato tahaka izao, fa ambony tsy manampaharoa kosa ny fihisarana ara-politika.
Tsy mbola nisy toy izany ny fanjavozavoana amin'izay hoe iza moa no eo amin'ny fahefana ao Venezoelà. Hatramin'ny Janoary 2019, governemanta avy amin'ny firenena miisa 65  manerana izao tontolo izao no mankatoa ny mpitarika ao amin'ny fanoherana  Juan Guaidó ho filoha ara-drariny ao amin'ny repoblika, fa ny hafa kosa mbola mitazona ny anarana i Nicolás Maduro — izay vao voafidy indray tamin'ny Mey 2018, tao anatin'ny sahoan-dresaka ho nisian'ny hosoka ara-pifidianana–.
Tamin'ny 30 Avrily i Guaidó niantso ny vahoaka ho eny an-dalambe amin'izay nofariparitany ho “dingana farany” amin'ny “Bemidina Fanafahana”, ezaka iray hamaranana ny governemantan'i Nicolas Maduro. Mandeha ny hetsi-panoherana  any amin'ny tanandehibe maro ao amin'ny firenena, nampiasa herisetra ny manampahefana hiezahana hanaparitahana ny mpanao fihetsiketsehana.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, efa lasa mahazatra ho an'ny manampahefana ara-panjakana, ho an'ireo mpiara-dia sy ireo mpanohana azy mamoaka hafatra ao amin'ny media sosialy izay mety manitsakitsaka ny fitsipiky ny Twitter  iadiana amin'ny kabarim-pankahalana sy ny fandrahonana maherisetra. Miantoka avy hatrany ny fampiatoana ny kaonty izany karazam-pihetsika izany, ary mety ho izany no nahatonga ny Twitter hanakatona ireo kaonty ireo (efa nanontany ny orinasa izay haneho ny heviny, ary mbola teo am-piandrasana ny valiny avy amin-dry zareo tamin'ny famoahana izao lahatsoratra izao).
Saingy mety hitondra vokany hafa ny hetsika, na izany ho an'ny vahoaka na ho an'ny orinasa. Ny governemantan'i Nicolás Maduro izao nitabataba  tamin'ny fanakanan'ny Twitter ireo kaonty ireo, nanamarika fa tamin'ny fotoana “nisian'ny fikasana hanongam-panjakana” no nisian'ny toe-javatra, izay nanoritra ny fiheverana avy amin'ny mpisera Twitter maro fa manana fitongilanana manohitra ny governemantan'i Maduro ny orinasa.
Mifanindran-dalana tamin'ny fanontaniana maro manandanja tamin'ny anjara toeran'ny Twitter (na niniana na tsia) ho mpandray anjara politika tao amin'io sehatra io, nahafahan'ny manampahefana mampitombo ny fanamarinana amin'ny hanakanana tanteraka Twitter koa izany.
Mila heverina ihany ihany koa ny sanda tsy manampaharoa ananan'ny kaonty tahaka ireo naato ireo — eny fa na dia mandrorarora teny fankahalana sy fitongilanana aza –. Satria naato ireo kaonty ireo, tafala amin'ny mason'ny sarambambem-bahoaka izay sioka navoakan'ireo teo aloha. Tsy hitantsika izay nolazain'ny manampahefana sy ny tsy nolazainy izay mety niteraka izao valiny izao — mitondra fotsiny izao mankany amin'ny pejin'ny “kaonty naato”  ny rohy. Raha tsy hoe nisy mpandray anjara fahatelo nanangona ny torohay tany an-toerankafa rehetra tany, tsy misy ny fandraketana hitam-bahoaka amin'izay navoakan'ny kaonty tany aloha.
Na namoaka torohay manandanja na tsia ireny kaonty ireny, manana ny lanjany hatrany izay hafatra avy any amin'ny manampahefam-panjakana — na dia misy manohitra aza ny sata ofisialin-dry zareo –. Manome varavarankely tokana ao amin'ny saina sy ny fihetseham-pon'ny olona ny Twitter, manana ny akony manokana ireo ao anatin'ny fotoanan'ny krizy politika. Te-hahafantatra izay eritreretin'ny mpitarika ny vahoaka.
Mandray anjara amin'ny fanakelezana  ny talakimason'ny torohaim-bahoaka izay azon'ny Venezoelana ireny fanesorana ireny, raha tapatapaka hatrany ny herinjiro sy ny aterineto, ary tsy afa-mandeha intsony ny media sosialy goavana sy ny tambajotram-baovao tahaka ny BBC sy ny CNN.
Tsy mizotra afa-tsy mankany amin'ny krizin'ny vaovao ny fanakanana resaka bebe kokoa tsy ho hitan'ny masom-bahoaka.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/05/05/138279/
 May 1, 2019: https://twitter.com/camilateleSUR/status/1123649595391848448?ref_src=twsrc%5Etfw
 Naverina ho afa-miasa: https://twitter.com/ConsuladoVenVan/status/1124007340766826497
 vao sambany: https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-twitter-idUSKBN1980U1
 firenena miisa 65: https://www.aljazeera.com/news/2019/02/venezuela-65-countries-support-guaido-backs-maduro-190215134801090.html
 mpitarika ao amin'ny fanoherana: https://twitter.com/jguaido/status/1123161692219686912
 Mandeha ny hetsi-panoherana: http://efectococuyo.com/la-humanidad/gnb-y-faes-reprimieron-protestas-en-barquisimeto-y-vargas-este-1may/
 fitsipiky ny Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-rules
 pejin'ny “kaonty naato”: https://twitter.com/account/suspended